प्रधानमन्त्री ओलीको वेबसाइटमा पोर्न भिडियो ! | Dinesh Khabar
प्रधानमन्त्री ओलीको वेबसाइटमा पोर्न भिडियो !
२०७६ फाल्गुन ३, ०४:२५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत वेवसाइट केपीशर्माओलीडटकम (kpsharmaoli.com) मा पोर्न भिडियो अपलोड भएको पाइएको छ । व्यक्तिगत जानकारी समेटिएको ओलीको सो वेभसाइटको डोमेन एक्पाएर भएपछि अन्य व्यक्तिले पुनः दर्ता गरी पोर्न भिडियो अपलोड गरेको देखिन्छ।
सन् २०१७ को मार्च अन्तिमतिरसम्म व्यक्तिगत जानकारी समेटिएको ओलीको वेवसाइट अस्तित्वमा देखिएपनि त्यसपछि भने अर्कै व्यक्तिले दर्ता गरेर दुरुपयोग भएको देखिन्छ। लामो समयसम्म ओलीले सो डोमेन नवीकरण नगरेपछि अर्कैले दर्ता गराएर दुरुपयोग गरेको बुझिएको छ।
चीनको छेन्दु वेस्ट डायमेन्सन डिजिटल टेक्नोलोजीले सन् २०१९ को मे २८ मा सो वेवसाइटको डोमेन पुनः दर्ता भएको देखिन्छ। यस्तै डोमेनको म्याद सकिने मिति आगामी मे २८ उल्लेख छ । आईपी लोकेसन क्यालिफोर्निया देखाइएको डोमेन दर्ता गरिँदाको आईपी ठेगाना 156.238.216.62 देखिएको छ।
उक्त वेवसाइटमा अहिले सयौँ अश्लिल भिडियोहरु राखिएको छ।
यस्तो तथ्य थाहा पाएर सो वेवसाइट सरकारले बन्द गराएको भएपनि भीपीएन प्रयोग गरेर अझै हेर्न सकिने अवस्था छ । भीपीएन प्रयोग नगरी खोल्दा भने संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, तथा नेपाल दुर संचार प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम वेबसाईट बन्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ। व्यक्तिगत वेवसाइट नवीकरण नगरेका ओलीको अहिले अर्कै वेवसाइट http://kpsharmaoli.com.np/ सञ्चालनमा छ। -रातोपाटीबाट
२०७६ चैत्र १६, १०:३४
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान नपाएका नागरिकलाई रोजगारी दिने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका तथा फर्किएकाहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सामेल गरिने सरकारक … विस्तृतमा
२०७६ चैत्र १६, ०९:१०
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नलिन घोषणा गरेको लकडाउनको अवधि थप गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को भर्खर सकिएको बैठकले २५ गते मध्यरातिसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। … विस्तृतमा
२०७६ चैत्र १६, ०८:१४
पर्यटन, यातायात र स्वास्थ्य क्षेत्रले ५ दिनमै कर्जा पाउने
यातायात तथा पर्यटन क्षेत्रहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ दिनमै कर्जा पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै ५ दिनमै कर्जा उपलब्ध गराउन … विस्तृतमा
सीमामा नेपालीको नाराबाजी ‘आफ्नो जनता फिर्ता लेउ’
सेती अस्पतालका तीन जना स्वास्थ्यकर्मीको नमूना संकलन
बैतडीमा क्वारेन्टाईनमा बसेकालाई मदिरा सेवन गराउने एकजना पक्राउ